Jaban qaybo bir ah oo lagu shaabadeeyo birta alaabada iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ouzhan
Qaybaha birta xaashida waxaa ku jira qaybo shaabad lagu dhufto. Qaybaha birta xaashidu waa alaabooyin lagu farsameeyo tiknoolajiyada birta ah. Ma sameyn karno la'aanteed qeybaha birta ah meel walba oo nolosheena ah. Qaybaha birta xaashidu waa iyada oo loo marayo birta korantada, goynta leysarka, farsamaynta culus, isku xidhka birta, iyo sawir biraha. Waxaa lagu soo saaray sawir, goynta plasma, alxanka saxda ah, duubista sameynta, foorarsiga birta, u dhinto been abuur, goynta jet biyo, iyo alxanka saxda ah.
Qalabka birta lagu dhejiyo qaybo sax ah - saxan xaashi saxan bir mashiinka lagu farsameeyo qaybo mashiinno
Qeexitaanka joornaal xirfadlayaal ajnabi ah ayaa ku qeexi kara birta xaashida sida: birta xaashida ahi waa geedi socod shaqo oo qabow oo dhammaystiran oo loogu talagalay waraaqaha birta ah (badanaa ka hooseeya 6mm), oo ay ku jiraan xiirashada, feer / goynta / isku darka, laabashada, alxamida, jeexitaanka, iyo xoqitaanka, Samaynta ( sida jirka gaariga), iwm Muuqaalkeeda xuska leh waa dhumucda isku midka ah ee isla qeybtaas. Waxyaabaha birta xaashidu waxay leeyihiin astaamaha miisaanka khafiifka ah, xoogga sare, habsami u socodka korantada, qiime jaban, iyo wax soo saar tiro badan oo wanaagsan. Waxay leeyihiin adeegsiyo ballaaran. Falanqaynta birta xaashida ayaa si ballaaran loogu isticmaalay dhinacyada elektaroniga, isgaarsiinta, warshadaha baabuurta, iyo qalabka caafimaadka. Tusaale ahaan, kiisaska kumbuyuutarka, taleefannada gacanta, iyo MP3, biraha birku waa qayb aan lagama maarmaan ahayn. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaalaa soo saarista qalabka caafimaadka, waxaana sidoo kale loo adeegsadaa gawaarida iyo gawaarida (gawaarida) meydadka, fuselageska diyaaradaha iyo baalasha, miisaska caafimaadka, saqafka dhismaha (dhismaha) iyo codsiyo kale oo badan.
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan qaybo bir otomaatiga ah otomaatiga
- Waxay xaqiijin kartaa isku-dhafka dabacsan ee mashiinno badan oo feer ah, iyo raritaanka otomaatiga ah iyo dejinta iyo shaqeynta isku-xirka heerar kala duwan oo xorriyad ah ayaa buuxin kara shuruudaha geeddi-socodka wax soo saarka adag;
- Waxaa lagu qalabeyn karaa kormeerka muuqaalka CCD ee warshadaha si loo xaqiijiyo qabashada bilaashka ah ee shaqooyinka adag;
- Waxay xaqiijin kartaa soosaarka ballaaran ee joogtada ah ee hal shaqo oo keliya, oo wuxuu ogaan karaa wax soo saarka tooska ah ee beddelaadda noocyo badan iyo dufcado yaryar;
- Isku-habeyn sarreysa, si loo gaaro isgaarsiinta qalabka kale sida qalabka mashiinka CNC, PLC, dareemayaal dibedda ah, iyo in lagu gaaro xakameyn isku xigxiga oo ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada;
- Kala duwanaansho: waxqabadka sare ee ka-hortagga shilalka, kormeerka wax soo saarka, dhidibka dibedda, pallatizing iyo shaqooyinka kale ee ikhtiyaariga ah;
- Khadadka wax soo saarka otomaatiga ah ee khadka tooska ah iyo qaabeynta "dhijitaalka ah" si fudud ayaa lagu ogaan karaa, iyadoo la badbaadinaayo shaqaalaha lana hagaajinayo muuqaalka farsamo ee wax soo saarka warshadda.
Qaybo ka mid ah mashiinada shaabad ku xardhan bir naxaas ah
Waxyaabaha Xaashida la duubay ee qabow, xaashida galvanized, birta birta ah, aluminium saafi ah iyo aluminium aluminium ah, naxaas saafi ah iyo dahaadh naxaas ah, tiknoolajiyada farsamaynta dusha sare ee birta
Daaweynta dusha sare Marka loo eego sifooyinka alaabta ceeriin iyo shuruudaha macaamiisha, daaweynta dusha sare waxaa loo sameeyaa si loo gaaro saameyn qurux badan oo waarta.
Nidaamka ugu muhiimsan Falanqaynta shaabadda birta
Hore: Qaybaha birta xaashida shaabadaysan
Xiga: Alxanka qaybo bir ah